Koorso dhameystiran oo ArcMap ku qoran Isbanish - Geofumadas
Koorsada ArcMap oo dhameystiran oo Isbaanish ah
Oktoobar, 2007 ArcGIS-ESRI, Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS
Tani waa koorso dhamaystiran oo ka mid ah ArcMap, oo leh tusaalooyin iyo fiidiyowyo.
maaddadu ay tahay wax soo saarka ee Hernán Rodrigo Retamal Norbega iyo Luis Muñoz kuwaas oo bilowday qorshahan ay ahayd markii hore ee Portugal iyo inkastoo layliyada waa versions 8, macquulka dil ay aad uma uu is beddelay.
Cutubka koowaad Qeexitaannada iyo fikradaha GIS qaarkood ayaa lagu daray.
Cutubka labaad Waxay ku saleysan tahay adeegsiga aaladaha aasaasiga ah:
Lakabyada, sifooyinka, naqshadeynta iyo calaamadeynta, waxa kale oo ku jira qayb ka mid ah su'aalaha aasaasiga ah ee maaraynta.
Cutubka saddexaad Waxay diiradda saareysaa soosaarka khariiddada, oo aad u dhammaystiran marka la maareeyo lasaarka soosaarka
Cutubka afaraad Mawduucyada hubinta iyo soo dejinta ee qaababka CAD, tafatirka qaabaynta, iyo la dagaallanka macluumaadka aan juquraafiga ahayn iyada oo loo marayo qodobbada xakameynta ayaa laga wada hadlay.
Labada cutub ee ugu dambeeya waxay ku saabsan yihiin maareynta xogta, iyadoo loo marayo ArcCatalog, maareynta magaca, jiilalka suulka, metadata iyo nidaamyada saadaalinta; iyada oo aan laga tagin is dhexgalka macluumaadka Ole iyo macluumaadka shakhsi ahaaneed.
Mid ka mid ah ilaha ugu wanaagsan ee wax this yihiin videos badbaadiyey screen, halkaas oo aad ka baran kartaa wax badan ka badan buugagan qoran. Waxa ku jira ee wax this waxaa si xor ah oo shati leh, si ay u la koobiyeysan karaa, daabacan oo loo qaybiyey ujeeddooyin waxbarasho oo kaliya ku tilmaamayaa in qoraaga iyo ilaaliyaan taxadir in aadan ka beddeli jira (waxaa loo isticmaali karaa cutubyada isakoo haddii aad rabto in aad ku darto content).
Dib u cusboonaysii Agoosto 2011: Nasiib darro, waxaan ku sii jirey degaan aan mar dambe adeegga bixin. Maxaa loo baahan yahay in la sugo haddii ay heli karaan meelo kale.
Wargelinta March 2012: Starmedia ma aysan siinin sii wadida xoriyadda freeweb, halkaasoo hore loogu martigeliyay, laakiin waxay awoodeen inay helaan meelo multimania.es. Dhamaan xiriirada waa kuwo aad u sareeya, inkastoo ay tahay inaad ku noolaato xayeysiin shaki ah oo aan lagama-maarmaan aheyn marti-gelinta lacag la'aanta ah iyo calaamad ahaan si loo kordhiyo adeegga bilaashka ah ee qoraallada tababarka.
Post Previous«Previous orthophotos Sida georeferenced ee Google Earth
Post Next Ducada Sweet ee CadastareNext »
27 Jawaab ah "Koorso dhamaystiran ee ArcMap ee Isbanish"
Manuel Orlando Martinez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan doonayaa inaan buug ku iibsado Spanish
Si xun, ma siin karno koorsooyinka ArcView
HUMBERTO GUTIERREZ isagu wuxuu leeyahay:
WALAYSO HADDII AAD U BAAHAN TALLAALKA CODSIGA ARK VIW
U ARRIMO SHAQADA AASAASIGA AH
mcm isagu wuxuu leeyahay:
Qaar ka mid ah waxbarid fiidiyoow ah oo ku saabsan buugga Schematics ee ArcMap Tababarka, ama meesha aan ka soo bixi karo layliyada
Buuggani ma uusan diyaarin Geofumadas, waxaannu ku siinnay oo kaliya.
Tan waxaa loo isticmaali karaa hadba inta aanay ahayn faa'idada, marka la eego waxa dhibcooyinka la xiriira:
REYNA MICAELA FLORES TORRES isagu wuxuu leeyahay:
Galab wanaagsan, waxaan kuu soo qorayaa Chihuahua, Mexico. Waxaan ka shaqeeyaa buug-gacmeedka oo waxaan aad u xiiseyneynaa helitaanka buugaagta ArcMap ee Spanish-ka waxaana jeclaan lahaa inaad tilmaanto tallaabooyinka la raacayo.
Waan kuugu mahad celinayaa horey ujeclaantiina waxaan ahay adeegaaga. Reyna Micaela Flores Torres
Juan Pucha isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayaa KAALMADA SPANISH ee ku saabsan maamulka barnaamijka ARGIS 10
Françisco Mendez Marin isagu wuxuu leeyahay:
halkaas oo aan ka heli karo buugta Arcmap, waxaan haystaa shaqo oo aanan ka heli karin sida loo sameeyo bedelka ... waad ku mahadsantahay
Waxaan horeyba u cusbooneysiiyay xiriirka.
Maya, blogka Franz kuma laha Geofumadas.
Marco isagu wuxuu leeyahay:
Way fiicnaan laheyd in la helo xidhiidhada, su'aasha ah in Franz Blog uu iska leeyahay Geofumadas.
José Luis isagu wuxuu leeyahay:
Mucjisooyin aad u sarreeya ayaa wax ka qabta wararka wargeyska starmedia, ma gudbin kartaa cinwaanka dhabta ah? Waad ku mahadsantahay aad u badan.
steban18 isagu wuxuu leeyahay:
si aad u ogaatid Arcgis lacag la'aan
geli bogga garabka:
RumicheB isagu wuxuu leeyahay:
Xiriiradu waxay leeyihiin fayraska Iframe Trojan ama wax sidaas oo kale ah. Haddii aad u gudbin kartaa server-ka lacag la'aan ah, waa la soo dhaweynayaa
Jorge Sierra isagu wuxuu leeyahay:
Asluub, waxaad dhihi doontaa buugaagta Rodrigo Nórbega iyo Luis Hernán Retamal Muñoz. Waxaan kaliya ku faafiyey boostada.
Waxaan doonayay inaan tago bogga buugagga g! laakiin waxay leeyihiin fayras, a Trojan waxaa laga dhejin karaa by my antivirus.
Internetka waxaad ka heli kartaa fiidiyowyo iyo koorsooyin la mid ah kan lagu soo dhejiyay qoraalkan. Barnaamijku waa inuu iibsadaa, ama u tagaa qaybiyaha magaaladaada oo ku siin kara nooca 30 maalmood oo aad wax ku baran karto.
Siyaabo kale oo lagu helo si sharci-darro ah kuma jiraan anshaxa shaqada.
betina isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan u baran karo arcmap.conseguir barnaamijka iyo buugga. Miyaad baran kartaa internetka?
Waxaan kugula talin karaa fiidiyowyada bogga Gabriel Ortiz, waxaan hubaa in ArcGIS ay sahlanaan doonto inay bartaan.
wenceslao isagu wuxuu leeyahay:
hello sida aad adigu tahay, waxaan xiiseynayaa inaan baro wax walba oo ku saabsan gis khariidad khaas ah iyo khariidad iyo waxaan jeclaan lahaa in aan helo buuga. waad ku mahadsantahay
Yosbanis isagu wuxuu leeyahay:
fadlan waxaan jeclaan lahaa inaan helo buug ArcGis maxaa yeelay ma haysto fursad aan ka helo internetka
Ma aqaano isaga
jessenia isagu wuxuu leeyahay:
garanayaa Alfonso Cruz, waxaan u baahanahay inaan raadsado
Salaan Diego, mid kasta oo ka mid ah xiriiriyeyaashaas, sida "cutubka koowaad" waxay kuu geysaa buugga, taas oo dhacda in aysan ahayn dukumiinti, laakiin degel sababta oo ah waxay leedahay fiidiyowyo.
u sheeg meesha dhabta ah ee buuggu ku yaal, waxaan kuugu mahad naqayaa barnaamij aad u fara badan
buugyada waxaa lagu heli karaa qaamuusyada boostada, waxaa sidoo kale lagu talinayaa in qaar ka mid ah fiidiyowyada ku jira golaha Gabriel Ortiz
HELLO waxaan ku faraxsanahay in aan dhamaysto dhamaan ARGISKA ARGIS SADDEXAAN ILAAHAY IN AAD KA QAYB QAATAY